Farmaajo mushaar xalaal ah ma qaataa? | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo wuxuu ballan qaaday in dadka abaaruhu saameeyeen uu qeyb ka siin doono, mushaar sagaalkii bilood ee la dhaafay uu ku qaadanayay qaab sharciga ka baxsan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay billowgii bishii Feberaayo 2021, Farmaajo, ayaa dhawaan ku dhawaaqay in mushaarkiisa bilaha November iyo December, uu ugu deeqay dadka ay abaabuhu saameeyeen, ee ku dhawaad Sideeddi bilood ee la soo dhaafay la daalaa dhacayay saameynta is baddelka cimillada.
Hadaba is weydiinta ayaa ah, Farmaajo, xaq ma u leeyahay mushaar uu ku helo xilka Madaxweynaha Soomaaliya, maadaama mudadiisa sharciga ah ay ku ekeyd 7-dii Feberaayo 2021?.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalku wuxuu xilka haynayaa muddo afar (4) sano ah oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo, sida ku xusan qodobka 96 ee dastuurka, taas oo ka dhigan in 8/2/2017 ilaa 7/2/2021, uu Farmaajo xaq u lahaa mushaar sida sharciga ah.
Sagaal bilood oo u dhiganta 42 isbuuc, lana micno ah 291 Maalmood, ku dhawaad 7000 oo saacadod, ayuu Farmaajo sifo sharciga baalmarsan, ku sheegtaa jagada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana xilligaas u socday mushaar xaaraan ah uusan xaq u lahayn.
12-kii April 2021, Farmaajo, wuxuu muddada xil-heyntiisa ku darsaday labo sano oo dheeraad ah, taas oo lagu suntay tallaabo sharci darro ah iyo ku tumashada shuruucda dalka, waxaana ugu danbeyn damacaas la burburiyay dhamaadki bishaas kadib markii ay ka hortageen ciidan ka tirsan xoogga dalka.
1-dii May 2021, wuxuu hoggaanka doorashooyinka iyo amniga dalka ku wareejiyay Ra’iisul Wasaraha Xil-gaarsiinta, hayeeshee, tan iyo xilligaas, wuxuu u tafa-xeydnaa falkinta fowdo siyaasi ah, boobka kuraasta doorashada iyo bililiqada hantida qaranka.
Abaarta ka jirta DDS Itoobiya oo laga jawaabay
Warar 16 January 2022 4:02